Ịgba akwa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ịgba akwa
Vladimir akwa ịnyịnya ibu
Umu anumanu di iche iche, ndi a na-akppo "ugbo ugbo", bu otu n'ime umu uzo ndi mmadu. Ebumnuche nke ụdị a sitere n'aha ya; A na-eji ọtụtụ ugbo ugbo ebu ibu ibu ibu. Ọ bụ ezie na e kere ịnyịnya ahụ iji meziwanye ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ, ndị ọzọ nwere ike ịpụta ya, ọrụ dịgasị iche iche dị iche iche, nke ọ na-adịkarịghị nhata.
Nri nri sunflower: nkọwa na ngwa
Nri nri sunflower bụ nri dị mma nke na-ejikarị eme ihe n'ugbo. N'ihi ojiji nke nri sunflower, ọ ga-ekwe omume iji mee ka ụba na ụmụ anụmanụ na-amụbawanye. N'isiokwu a, anyị ga-agwa maka nri ndị na-enye sunflower, ihe ọ bụ na otu esi eji ya.
Otu esi emeso ogbe mmiri ara ehi
Ọrịa mmiri ara ehi bụ otu n'ime ọrịa ndị e ji mara ehi. Ọ dabara nke ọma, ọ naghị enwe nsogbu siri ike ma bụrụ nke a ga-emeli. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu yiri nke ahụ, ma amaghị ihe ị ga-eme, isiokwu a bụ maka gị. Ihe na-eme ka e jiri nkume na-emepụta ihe dị iche iche na-esi na salts phosphate ma ọ bụ na ikpe mgbe calcium si na salite casin.